Nezvedu - LANGFANG OLAN GLASS BEADS CO., LTD
Yakatangwa muna2010, LANGFANG OLAN GLASS BEADS CO., LTD inyanzvi yekugadzira magirazi mabhesi muChina, nehunyanzvi hwekugadzira tekinoroji, kambani yakaona gore pagore kukura kune rakabudirira bhizinesi nhasi. Tinogona kugadzira akasiyana magirazi magirazi ekuchengetedza mumugwagwa uye maindasitiri chinangwa. Uye iyo kambani yakatsaurirwa kune yepamugwagwa chengetedzo indasitiri ine basa remugwagwa chengetedzo nyanzvi.
Yedu Main Zvigadzirwa
Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinoratidzira girazi mabhesi emigwagwa yekumaka, sandblasting girazi mabheji, isina girazi magirazi emagetsi, kukuya magirazi mabhesi, yakakwira index girazi mabheji uye girazi regirazi marozi. Reflective girazi mabhesi emumigwagwa wekumaka ndeimwe yezvinhu zvakakurumbira zvigadzirwa, tichishandisa mhando yepamusoro zvigadzirwa mukumaka, isu tinopa hurefu, chengetedzo uye kuoneka kwegore rese, negirazi mabhesi akaiswa mukati medu zvinhu kuti zvipenye mukati mehusiku.
Uine makore anopfuura gumi ane ruzivo rwekugadzira uye kutumira kunze, zvigadzirwa zvedu zvakahwina mukurumbira wakanaka mumusika wepasi rose weiyo yepamusoro mhando uye yemakwikwi mutengo. Kugadzira kwedu kunoramba kuchichengetwa, kunatsiridzwa uye kugona kuwedzerwa kuzadzikisa zvido zvinowedzera zvezvigadzirwa zvedu. Kuenderera mberi kwekuitwa kwesisitimu yekugadzira inobatsira mukutitsigira kuti tiwane ISO 9001: 2015 Certification.
Pahwaro hwekuvandudza tekinoroji, kambani icharamba ichitarisa zvakanyanya pane zvakakosha manejimendi, mhando yakatsiga, ichienderera mberi ichivandudza masevhisi ekutanga-kutengesa, masevhisi uye mushure mekutengesa masevhisi, uye nekuvandudza kukwikwidza kwemusika kwezvigadzirwa zvedu. Kubva hwaro, iyo kambani inochengeta iko kutenda "kiredhiti kutanga, kasitoma yakanangana, mhando yepamusoro uye mutengo unonzwisisika". Tiri kutarisira kunzwa kubva kwauri uye chako chakakosha mupiro mukusimudzira kwedu mune ramangwana. Isu tinopa yepamusoro notch sevhisi sevhisi uye mhinduro. Ndinokutendai nebhizimisi renyu uye rutsigiro! Langfang Olan Glass Beads Co, Ltd ichagara iri chengetedzo yako munzira.